अष्ट्रेलियामा बसेर पनि नेपाली भलिबलकाे बिकासमा इट्टा थप्दै-राजकुमार | Neplays.com
अष्ट्रेलियामा बसेर पनि नेपाली भलिबलकाे बिकासमा इट्टा थप्दै-राजकुमार
By Neplays	 Last updated Jan 29, 2019
नेपाली भलिबलको विकासका लागि यतिबेला स्वदेशी मात्र होइन, विदेसमा रहेका नेपाली हातहरु पनि अगाडी बढ्न थालेका छन् । नेपालमा जन्मिएर विदेशलाई कर्मभूमी बनाएका मध्ये एक हुन राजकुमार अधिकारी ।
कास्कीका राजकुमार अधिकारी अहिले अष्ट्रेलियामा छन् । २०३२ सालमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा जन्मिएका अधिकारी पहिला नेपालमा हुँदा भलिबल खेल्ने गर्थे । नेपालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको पनि धेरै समय भएको छैन् । तर नेपाली भलिबको इतिहासमा विभिन्न संस्थानहरुले बनाउने टिमको प्रभाव राम्रो देखिन्थ्याे ।
विभिन्न संस्थानका साथै प्रदेशस्तरका भलिबल टिम र विभागीय क्लबहरुले यसको श्रीबृद्धिमा योगदान दिँदै आएका छन् । भलिबल संघमा मनोरञ्जन शर्मा र जीतेन्द्रबहादुर चन्द क्रमश अध्यक्ष र महासचिबमा आएपछि अहिले नेपाली भलिबलले फड्को मारेको छ भन्दा पनि हुन्छ । नेपालका हरेक ठाउँमा सजिलै खेल्न सकिने भलिबल क्रमश व्यवसायिकता तर्फ पनि अघि बढी रहेको छ ।
नेपाल भलिबल संघले अहिले आफ्नो विस्तारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लगेको छ । खासगरि नेपालीहरु रहेका विभिन्न देशमा भलिबलको विकास गर्ने उद्देश्यले यस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ । नेपाल भलिबल संघले जापान, मकाउ, सिंगापुरका साथै पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुलाई समेटर त्यहाँ समितिनै बनाएको छ । अष्ट्रेलियामा कास्कीका राजकुमार अधिकारीकाे उपस्थितिमा कृष्ण सुनार अध्यक्ष र राजु गाैतम महासिचब रहेको नेपाल भलिबल संघ अष्ट्रेलिया गठन गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा नेपालीहरु मिलेर १० वटा भलिबल क्लब नै बनाएका छन् । हुनत अष्ट्रेलिया भन्ने वित्तिकै धेरैको ध्यान खेलको कुरा गर्द क्रिकेट भन्ने पनि बुझिन्छ । सँगसँगै भलिबलमा पनि अष्ट्रेलियाले राम्रो विकास गर्न सकेको नेप्लीज भलिबल संघका संयाेजक समेत रहेका अधिकारी बताउँछन् । उनै अधिकारी नेपाल आएको सन्दर्भ पारेर नेप्लेजका प्रतिनिधी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाई कसरी भलिबलमा आउनु भयो ?
विगतमा हामीले विभिन्न संस्थानहरुको टिमले भलिबल खेलेको सुन्थ्यौं । संस्थानहरु त्यतिबेला भलिबलका पावर हाउस मानिन्थे । त्यो देख्दा राम्रो खेलाडी पनि भइने । त्यतिबेला हामीले स्कूलबाट पढेर आएपछि घरको काम सकेर बचेको समय भलिबललाई दिन्थ्यौं । मैले विद्यालयस्तरिय प्रतियोगिता, विरेन्द्र सिल्ड खेलियो, क्लबस्तरिय तथा जिल्लास्तरिय प्रतियोगिता खेलेको थिए ।
यसैगरी क्याम्पस पढ्दा स्ववियूले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि खेलेको थिए । प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितामा म पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट पनि खेलेको थिए । म १५ बर्षको हुँदा देखिनै भलिबलमा लागेको हुँ । अहिले ४५ बर्षको उमेरसम्म पनि भलिबलमा लागि रहेको छु । तर अहिले खेलाडी होइन की म व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेको छु । हाम्रै पहलमा पोखरामा भलिबल महोत्सबको नै आयोजना गरेका थियौं । म २००७ मा अष्ट्रेलिया गएको हुँ । सुरुमा आफ्नो इच्छालाई विसाएर त्यहाँको हावापानीसँग सेटल हुनुपर्ने वाध्यता थियो । अलि सहज भएपछि मैले आफ्नो इतिहास सम्झिए र भलिबलमा पुनः फर्किएको हुँ ।
म अष्ट्रेलिया गइसके पछि नेपालीहरु मिलेर भलिबलको प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न सुरु गरेका हौं । हामी हप्तामा पाँच छ दिन काम गरेपछि एक दिन भलिबलका लागि हामीले समय निकाल्थ्यौं । अहिले हामीले भलिबल खेल्न जम्मा भएका साथीहरुले अष्ट्रेलिया आउने नयाँ साथीहरुलाई सहयोग गर्ने फोरम पनि बनाएका छौं । भलिबल खेल हेर्न जाँदा नेपालीहरुले सहयोग पाइन्छ भन्ने भावना पनि विकास भएको छ । नयाँ पुग्नेहरुलाई जव देखि विभिन्न सेटलमेन्ट गर्नलाई सहयोग पनि गरेका छौं ।
अष्ट्रेलियामा गएर भलिबलमा लाग्न कति संघर्ष गर्नु पर्यो ?
हरेक मान्छे अहिले एकदमै व्यस्त छन् । तर तपाइसँग इच्छाशक्ति भयो भने जतिसुकै व्यस्त भए पनि समय निकाल्न सकिन्छ । मेरो भलिबलको नेट र बलसँगको समबन्ध रहेकाले जतिसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि मैले समय निकाल्न सफल भएको छु । भलिबलकै कारण मैले पाँच दिनको काम गर्दाको ‘स्ट्रेस’लाई विर्सने गरेको छु । अष्ट्रेलियामा मेराे उपस्थितिमा कृष्ण सुनार अध्यक्ष र राजु गाैतम महासचिवकाे नेतृत्वमा भलिबल संघ अष्ट्रेलिया गठन गरिएकाे छ ।
अष्ट्रेलिया भन्दा क्रिकेट बुझिन्छ तर त्यहाँ भलिबलको माहोल कस्तो छ?
हामीले नेपाली समूदायमा भलिबल त स्थापित गरेका छौं । मैले क्षेत्रिय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेट नजिकै रहेर व्यवस्थापन समेत गरेको अनुभव लिइसकेको छु । मैले अष्ट्रेलियाबाट भलिबलको रेफ्री कोर्स लिएको छु । सुरुमा जुनियर रेफ्री भए, लेभल वान टु गर्दै अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।
गत अप्रिलमा जर्मनी र ब्राजिलको भलिबल टिम अष्ट्रेलिया खेल्न आएको बेला मेलवर्नको सेन्ट्रल कोर्टमा ती खेलाडीहरुलाई नियमबारे जानकारी गराउने रेफ्रीको भूमिका पापए । जुन कुरा मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी पनि हो ।
अष्ट्रेलियाको भलिबल कहाँ नेर छ ?
अष्ट्रेलियाको भलिबल विश्वको टप १० भित्र पर्छ । अष्ट्रेलियाको भलिबल २५ बर्ष अघि त्यति विकास थिएन । मेन्समा टप टेन भित्र छ भने वमेन्समा बीच गेममा ओलम्पिक्समा मेडल जितिसकेको छ । एउटा खेलाडी भलिबल खेल्ने भनेको उसको करियरका लागि हो । उसको स्वास्थ्यका लागि हो ।
भलिबल एशोसिएशन गठन गर्न कत्तिको सजिलो रहिछ अष्ट्रेलियामा ? नेपालमा जस्तो सजिलो छैन् । एउटा संस्था दर्ता गरेर काम गर्न धेरै कानूनी प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्छ । त्यहाँका नियम कानुनहरु पनि निकै धेरै फ्लो गर्नु पर्छ ।
नेपालको भलिब संघ सँग कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
हामी जहाँ भए पनि पहिलो कुरा नेपाली हौं । हामीलाई राष्ट्रिय झण्डाको माया र सम्मान छ । यसैले हामीले नेपाली भलिबललाई पनि सहयोग गर्न तयार छौं । नेपालमा आयोजना हुन लागेको एशियन सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिब प्रतियोगितामा नेपाल भलिबल संघ अष्ट्रेलियाले सहयोग गर्न तयार छौं । उक्त प्रतियोगितामा हाम्रो सक्रिय सहभागिता पनि हुने छ ।
हामी नेपालको भलिबको विकासमा नेपाल भलिबल एशोसिएशनसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छौं । आगामी दिनमा पनि यस्ता अवसरमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता हुने छ ।
एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबललाई नेपाल सेटिलाइट टेलिकमकाे साथ
नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण भलिबल स्थगित
ग्लोबल टि–२० को बारेमा सोचेको छैन, विश्वकप छनोट महत्वपूर्णः सोमपाल कामी
मलेसिया आउनुको लक्ष्य पुरा भएको र अब सिंगापुरमा केन्द्रित छौं – पटवाल